Wasmada Habraha waaweyn nimanka yar dhib ma u keenaan | shumis.net
Home » galmada » Wasmada Habraha waaweyn nimanka yar dhib ma u keenaan
Habraha soomaaliyeed waxay bilaabeen inay raadiyaan nin dhalinyara ah, marka aad eegto naagaha waaweyn oo ku nool dalka yurub ama maraykanka inta ay ka tageen raggooda ayay u soo jeesteen nimanka yaryar, maxaayeelay wiilka dhalinyarka ah galmada aad buu ugu fiican yahay.
Sida la rabay ayuu u qancin karaa naagta, sidoo kale naagaha marka ay da’da weyn gaaraan waxaa ay ka heleen galmada culus, kacsigooda kintirka wuu dhaafaa wuxuu u gudbaa cambarka gudahiisa, sidoo kale marka ay dad’daas gaaraan aad bay u buurtaan waxaay yeeshtaan futo aad u weyn, qaar waxay tagaan dalalka africa qaarna dalalka carabta.
su’aal ayaa is weydiin mudan galmada naagaha waayeel ah ama raga dhib ma u keentaa? waxaa la dhahaa naagaha kaa weyn neefteeda ayaa dhib kuu keenayso laakin sida muuqata haddii naagta ay caafimaad qabto wax dhib ah kuuma keenayso laakinse haddii ay tiibisho ama cudur xun ay qabto waa inaad ka fogaataa.
Title: Wasmada Habraha waaweyn nimanka yar dhib ma u keenaan
Posted by Unknown, Published at December 09, 2016 and have 0 comments